Ukugquma kunye nokudweba iLila kwiLebhu
Ukugaya kunye nokudweba iirayi yeglasi yikhono elihle lokulawula i-glassware ye-laboratory. Nantsi indlela yokwenza ngayo.
Kukho ezimbini iindidi eziphambili zeglasi esebenzisa ibrabhu: ingilazi yeglasi kunye ne-borosilicate glass. Iblasi yeBorosilicate ingathatha iilebula (umzekelo, iPyrex). I-Glass ye-Flint ayibhalwe phantsi. Unokugoba uze udwebe iiglasi egciniweyo usebenzisa i-flame. I-glass borosilicate, ngakolunye uhlangothi, idinga ukushisa okuphezulu ukwenzela ukuba unciphise ukuze ukwazi ukuyisebenzisa.
Ukuba unesilayizi seglasi, zama ukusebenzisa i-alcohol burner, ekubeni ukushisa okukhulu kunokubangela ukuba ingilazi yakho idibanise ngokukhawuleza ukuyisebenzisa. Ukuba uneglasi ye-borosilicate, uya kufuna i-flame yerhasi ukuze usebenzise iglasi. Iglasi ayiyi kugoba okanye mhlawumbi kuya kunzima ukugoba ngentlaka yotywala.
Gcina i-tubing enezandi kwiindawo ezishushu kakhulu zomlilo. Le nxalenye eluhlaza okwesibhakabhaka okanye ngaphezulu kwephezulu yenkomo yangaphakathi yomlilo otywala. Injongo yakho ukutshisa iglasi yeglasi ofuna ukugoba, kunye neekentimitha ngaphesheya kweli nqaku. I-flame spreader iyanceda i-fire flame, kodwa ayifuni imfuneko.
Yitshintsha i-tubing ukuze uqiniseke ngokukrakra.
Njengoko ushushu kwaye ujikeleze i-tubing, sebenzisa uxinzelelo olunomoya oluphantsi kunye oluqhubekayo apho ufuna ukuba lube lugobile. Xa uziva ukuba iglasi iqala ukuvelisa, khupha umxinzelelo.
Ukufudumala imizuzu embalwa imizuzwana. Iqala ukugoba ngaphantsi kobunzima bayo, uyisisindo!
Susa i-tubing ekutshiseni kwaye uvumele ukupholisa imizuzwana emibini.
Kwisinye isigqibo, bhinqa iglasi elityhilekile kwi-angle efunwayo. Yibambe kuloo ndawo kude kube nzima.
Beka ingilazi kwindawo engenakushisa ukushisa ukuvumela ukuba ipholile. Musa ukuyibeka kwindawo ebanda, engabonakaliyo, njengobhenqo bencwadi yamatye, kuba oku mhlawumbi kuya kubangela ukuba iqhekeze okanye iphule! I-oven mitt okanye ipasti eshushu iyasebenza kakhulu.
Ukudweba i-Glass Tubing
Ukushisa i-tubing njengokungathi uya kuwuguqula. Beka icandelo leglasi eliza kutsalwa kwiindawo ezitshisa kakhulu zelangatye kwaye zijikeleze iglasi ukuze zitshise.
Emva kokuba iglasi igxeka, yisuse ekutshiseni kwaye udibanise iziphelo zombini ngokukhawuleza omnye komnye, kuze kube yilapho i-tubing ifinyelela ubukhulu obufunayo. Inye 'yokukhohlisa' ukuphepha ukufumana isaphetha okanye ikhefu eglasini kukuvumela ukuvutha komhlaba kukuncede. Gcina i-glass tubing vertical to draw it, okanye ukutsalisa kuyo okanye ukuvumela ukugqithisela kukudonsa phantsi.
Vumela ukuba i-tubing ipholile, uyinqumle kwaye umlilo uphawule iimilo ezibukhali.
Phakathi kwezinye izinto ezisetyenziswayo, oku kuyindlela efanelekileyo yokwenza iipipettes zakho, ngokukodwa xa ufumana zona unako zikhulu okanye zincinci ukuhambisa ivolumu efunwayo.
Nazi ezinye izizathu kunye nokulungiswa kweengxaki eziqhelekileyo:
I-Glass ayiyi kuhlamba- Oku kwenzeka ukuba ukushisa komlilo kuphantsi kakhulu ukutshisa iglasi. Isisombululo kukusebenzisa umbane otshisa, njengegesi.
I-Glass ithatha kakhulu i-Soft, i-Too Fast - Oku kubangelwa ukusebenzisa ukushisa kakhulu. Buyela emva ubude bexesha ubeka ingilazi ekushiseni, ubambe ngaphezulu kwinqanaba elitshisayo lomlilo, okanye usebenzise umbane oshisa ngomlilo opholileyo.
I-Glass iqhuma okanye i-Crimps - Oku kunokwenzeka ngokuguqa ingilazi ngaphezu kweyodwa okanye ngokuyivumela ukuba ithambe kakhulu kangangokuba ubunzima bayo buqala ukuyidiliza. Isisombululo kule ngxaki kuba ngamava kunye nokusebenza kuba kukho ubungakanani bokuthi 'ubugcisa' ukwazi ukuba ukususa nini iilazi efalini ukuze uyiguqule okanye uyikhuphe. Yazi nje ukuba xa unqumle ukugoba / ukudonsa, yinto yokusebenza yesikhathi esisodwa. Ukuba ayisebenzanga, akunakwenzeka ukuba uphinde uphinde uphinde uphucule iglasi kwaye ufumane umphumo ongcono.
Izibilini ze-Glass Tubing - Ukuba ngaphakathi kwe-tube ityilindi, kuba ingilazi ishushu kakhulu. Ukuba uguqa ingilazi, yususe ekushiseni okukhawuleza. Ukuba uthabatha iglasi, vumela upholise ngakumbi ngaphambi kokuba uyidwebe. Qaphela ukuba unokuba unqwenela ukutywina ingqungquthela iglasi. Ukuba wenza, vela nje ukutshisa i-tubing elangatyeni, ulijikeleze, de lide livale.
Indlela yokwenza i-Crystal Geode
I-Ketchup ne-Baking Soda Volcano
Leo iNgonyama - Iimpawu zeZodiac
1883 I-Pension Roll Online
Iingoma ezigqibeleleyo zokuSebenza kweR Rock
I-Allotrope Inkcazo kunye nemizekelo
Izinto EziMathandathu Ukugqiba Ngaphambi Kokuqala KuPaint
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uJames H. Wilson
Indlela yokusebenzisa iNgcaciso yesiFrentshi "J'en Ai Ras le Bol"
Iimifanekiso ezi-6 zeFilimu eziqhelana noFredric March
Ukucoca, ukukhethwa, iiBits, kunye neBollards: Ukugcina isitya sakho
Kutheni ama-Amphibians ehla?
Funda imibala yesiJamani
Imixholo Yemixholo Yokwazi Ukuqonda